साहसी महिला ! बढी भाडा लिने सहचालकलाई सबक सिकाए (भिडियोसहित) - Kendrabindu Nepal Online News
साहसी महिला ! बढी भाडा लिने सहचालकलाई सबक सिकाए (भिडियोसहित)
९ चैत्र २०७५, शनिबार २०:००
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका सार्वजनिक यातायातमा तोकिए भन्दा बढी भाडा लिनुलाई सामान्य मानिन्छ । भाडा १३ रुपैयाँ तोकिएको हुन्छ । तर चानचुन छैन भन्दै सहचालकहरु १५ रुपैयाँ नै लिन्छन् । २ रुपैयाँ फिर्ता माग्दा सहचालकको रुखो बोलीमा यात्रुहरुले मुखभरीको जवाफ सुन्नुपर्छ ।
यो सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने सबै यात्रुको समस्या हो । यो कारण तपाई हाम्रै कारण भएको भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण देखिएको छ । ठूलो भर्‍याङबाट गौशालासम्मको भाडा तोकिएको थियो ७० रुपैयाँ । तर बा४ख ६४७५ नम्बरको बसका सहचालकले यात्रुहरुबाट ८० रुपैयाँ लिए । अर्कोतिर गन्तव्यमा नपुर्‍याई आधा बाटोमै यात्रुलाई झार्न थाले ।
त्यसपछि यात्रुहरुले प्रतिकार गरे । प्रतिकार गर्न खोज्दा उल्टै बसका चालक र सहचालक आक्रामक बने । बसका कर्मचारी र यात्रुहरुबीच विवाद चल्दा चल्दै बस गौशाला पुग्यो । गौशालामा यात्रुहरुले ट्राफिक प्रहरीलाई सम्पर्क गरे । ट्राफिक प्रहरी आएर बसका सहचालकलाई बढी भाडा फिर्ता गर्न निर्देशन दिए । तर मापसे (रक्सी) गरेका सहचालक उल्टै ट्राफिक प्रहरीमाथि नै जाईलाग्न थाले ।
ठूलो भर्‍याङकी चण्डीका चौलागाई लगायतका महिलाहरु बसका चालक र सहचालकको ज्यादतीको विरोध गर्दै आए । महिलाहरुसहितका यात्रुहरुले बढी भाडा लिएको र भाडा दरको लिष्ट पनि २०७१ सालमा तोकिएको लिष्ट नै देखाएको भन्दै कडा कारवाही गर्न माग गरे ।
अन्ततः बसका सहचालक गौशाला प्रहरी बृत्तको हिरासतमा राखियो । र बसका चालकले लिईएको बढी भाडा फिर्ता गरे । चण्डीका लगायतका यात्रहरुको साहसिक कदमले नै सहचालकबाट लुटिएका यात्रुहरुले लामो स्वास फेरे । र उनलाई धन्यबाद समेत दिए ।
चण्डीका चौलागाईले यसरी दैनिक हजारौ यात्रु ठगिने गरेको बताई । एक दुई रुपैयाँ गरेर पनि यात्रुहरुले प्रतिकार गर्न नखोज्दा सार्वजनिक सवारीले ठग्ने प्रवृति बढेको उनको भनाई छ ।
‘हामीले एक रुपैयाँ पनि कम दिँदा उनीहरु बसबाटै निकालिदिन्छन् । तर उनीहरु भने हामीहरुबाट एक एक रुपैयाँ गरेर पनि हजारौं यात्रुहरुलाई ठगिरहेका हुन्छन् । तर कसैले प्रतिकार गर्न खोज्दैन् । यो प्रवृति गलत हो’ उनले भनिन् ।
ट्राफिक प्रहरीले यात्रुहरुमाथि ठगी गर्ने सवारीलाई कारवाही गरिदैं आएको जनाएको छ । महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले तोकिएको दरभन्दा बढी भाडा लिने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, ट्राफिक नियमको उल्लघंन गर्ने सवारीहरु कारवाहीको भागेदार भईरहेको जनाएको छ ।
तस्बिर र भिडियोः सन्दिप आचार्य
traffic police nepal, ट्राफिक प्रहरी, बढी भाडा, बसका चालक, महानगरीय ट्राफिक महाशाखा, सहचालक
Prevआवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय खोल्न दिनुपर्छ- देउवा (भिडियोसहित)
सञ्चारमन्त्रीको चेतावनी, ‘विप्लवबारे समाचार बनाए कारवाही गर्छु’Next